Nooca cusub ee codsiga Maareynta Waqtiga Tamaandhada | waxaan ka imid mac
Codsiga ina siiya ikhtiyaarka ah inaan wax badan ka soo saarno Mac-gayada, Maareynta Waqtiga Tamaandhada, wuxuu helayaa nooc cusub oo dhigaya 7.0. Noocan cusub dhowr hagaajin iyo hagaajin kutaan ayaa lagu daray nuqulkii hore, sidoo kale waxay dejineysaa mid ka mid ah codsiyada ugu xiisaha badan kuwa doonaya ku raaxayso maaraynta wakhtiga shaqada run ahaantii wax ku ool ah marka ay hor fadhiyaan Mac-ga.
Xaaladdan oo kale version cusub yimid la dhimis waqti xaddidan in ay qiimaha iyo taasi waxay dhamaatay saacado ka hor nagu qasbaya in aan maqaalka wax ka beddelno. Si kastaba ha noqotee, waa codsi xiiso leh isticmaaleyaal badan oo hubaal ah waxay noqon doontaa mid mudan in la bixiyo.
Sharaxaadda waxyaalaha cusub ee uu hirgeliyay horumariyuhu waxay si cad u leedahay: "Tamaandhadu waxay tiraahdaa Hello to iCloud" Wax yar ama waxba aan ku dari karno in ka badan waxay ahayd waqtigii ay ku habboonayd iCloud. Marka laga soo tago wada shaqaynta ka muuqata noocan cusub ee dhammaan Mac, iPhone iyo iPad-kaaga waxaanu helnaa wararkan:
Waqti dheeraad ah oo loogu talagalay shaqada guriga iyo nasashada. Hadda waxaad haysataa 60 daqiiqo hawl kasta halkii aad ka ahaan lahayd 25 noocyadii hore
Hab cusub oo lagu maareeyo Hawlahaaga. Nidaam cusub oo ka dhigaya maaraynta hawlaha mid aad u fudud
Dib u bilow saacada, fadhiyada iyo yoolka maalinlaha ah adigoo hal gujis ah
Cayayaanka kala duwan ayaa go'an iyo hagaajinta waxqabadka
Habbee wakhtiyada aan rabno hawlaha, muujiya garaafyo taxane ah oo naga caawinaya hagaajinta dhinacyadan, u oggolaanaya in la joojiyo, dib u bilaabo ama dib u habeyno wakhti kasta oo aan u baahanahay inaan qabano hawl, samayno hawlo kala duwan si loo abuuro socodka shaqada iyo wax ka badan dheeraad ah. Codsigan u baahan macOS 10.13 ama ka dib. Hagaajinta wax soo saarkaaga ayaa aad ugu fudud codsiga Maareynta Waqtiga Tamaandhada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Nooc cusub oo loogu talagalay codsiga Maareynta Waqtiga Tamaandhada